Muvengi Wokupedzisira, Rufu, Achaparadzwa | Yokudzidza
“Muvengi wokupedzisira achaparadzwa ndirwo rufu.”—1 VAK. 15:26.
Jehovha akapa Adhamu murayiro upi wairatidza rudo asi usiri wokutamba nawo?
Zvakafamba sei kuti vanhu vatange kufa?
‘Muvengi wokupedzisira, rufu, achaparadzwa’ rini?
1, 2. Adhamu naEvha vaiva neupenyu hwakaita sei pakutanga uye mibvunzo ipi yatinova nayo?
ADHAMU naEvha pavakasikwa vainge vasina kana vavengi. Vainge vasina chivi uye vaigara muparadhiso. Jehovha ndiye aiva baba vavo uye vaiva neukama hwepedyo naye. (Gen. 2:7-9; Ruka 3:38) Basa ravakapiwa naMwari rairatidza kuti vaizorarama upenyu hwakaita sei. (Verenga Genesisi 1:28.) Basa rokuti ‘vazadze nyika, nokuikurira’ rine paraizoperera. Asi kuti varambe vaine ‘simba pazvisikwa zvose zvipenyu zvinofamba panyika,’ Adhamu naEvha vaifanira kurarama nokusingaperi, vasingafi.
2 Saka nei zvinhu zvakaita sezvazviri nhasi? Zvakafamba sei kuti vanhu vazova nevavengi vakawanda, kusanganisira muvengi mukuru, rufu? Mwari achaitei kuti aparadze vavengi vose ava? Bhaibheri rinopindura mibvunzo iyi nemimwewo yakada kufanana nayo. Ngatipindurei mimwe mibvunzo yacho.
MWARI AKANYEVERA VANA VAKE
3, 4. (a) Mwari akapa Adhamu naEvha murayiro upi? (b) Nei kuteerera murayiro iwoyo kwaikosha?
3 Kunyange zvazvo Adhamu naEvha vaigona kurarama nokusingaperi pane zvavaifanira kuita kuti varambe vachirarama. Vaifanira kufema, kudya nokunwa, uye kurara. Chinotonyanya kukosha ndechokuti vaifanira kuva neukama hwakanaka neMusiki wavo. (Dheut. 8:3) Kuti varambe vachinakidzwa neupenyu, vaifanira kubvuma kutungamirirwa naMwari. Jehovha akanyatsotsanangurira Adhamu zvose izvozvo asati atombosika Evha. Akazviita sei? “Jehovha Mwari akarayirawo munhu kuti: ‘Ungadya miti yose yomunda kusvikira waguta. Asi usadya muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, nokuti nezuva raunoudya chokwadi uchafa.’”—Gen. 2:16, 17.
4 “Muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa” waimirira kodzero yaMwari yokusarudza kuti chakanaka nechakaipa ndechipi. Adhamu akanga agara achiziva zvakanaka nezvakaipa nokuti akasikwa nomufananidzo waMwari uye aiva nehana. Muti uyu waiyeuchidza Adhamu naEvha kuti vaifanira kugara vachitungamirirwa naJehovha. Kudya muti iwoyo kwaizoratidza kuti havadi kutongwa naMwari, uye izvozvo zvaizoita kuti ivo nevana vavo vave nematambudziko akawanda. Murayiro wavakapiwa naMwari uye zvaizoitika kana vakasauteerera zvairatidza kuti iyi yakanga isiri nyaya yokutamba nayo.
KUTANGA KWAKAITA RUFU
5. Zvakafamba sei kuti Adhamu naEvha vasateerera Mwari?
5 Evha paakasikwa, akaudzwa murayiro waMwari naAdhamu. Evha ainyatsoziva murayiro iwoyo uye akaita seachatoudzokorora shoko neshoko. (Gen. 3:1-3) Akataura murayiro iwoyo kuna Satani uyo aitaura naye achishandisa nyoka, mhuka yainge yakachenjera. Satani Dhiyabhorosi aiva mwanakomana waMwari asi akarega chido chokuzvitonga uye kuva nesimba chichikura mumwoyo make. (Enzanisa naJakobho 1:14, 15.) Kuti zvaaida zviitike, akataura kuti Mwari anoreva nhema. Akaudza Evha kuti kana akatyora mutemo waMwari aisazofa, asi aizofanana naMwari. (Gen. 3:4, 5) Evha akabvuma kunyengerwa, akaratidza kuti aisada kutongwa naMwari nokudya muchero wacho akazonyengetedza murume wake kuti adyewo. (Gen. 3:6, 17) Dhiyabhorosi akanyepa. (Verenga 1 Timoti 2:14.) Asi Adhamu ‘akateerera inzwi romudzimai wake.’ Kunyange zvazvo nyoka yaiita seyaida kubatsira, Satani Dhiyabhorosi uyo aiishandisa aiva muvengi ane utsinye. Aiziva zvaizoitika kana Evha akasateerera Mwari.
6, 7. Jehovha akatonga sei Adhamu naEvha?
6 Adhamu naEvha vakapandukira Mwari uyo ainge avasika uye avapa zvose zvavaiva nazvo. Jehovha aiziva zvose zvakaitika. (1 Mak. 28:9; verenga Zvirevo 15:3.) Asi ainge apa Adhamu, Evha uye Satani mukana wokuratidza kuti vaimuona sei. Jehovha akarwadziwa zvokurwadziwa zviya paakaona vana vake vachipanduka. (Enzanisa naGenesisi 6:6.) Akabva avapa mutongo, maererano nezvaainge ataura.
7 Mwari akanga audza Adhamu kuti: “Nezuva [raunodya muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa] chokwadi uchafa.” Adhamu anogona kunge akafunga kuti “zuva” iri raiva remaawa 24. Paakatyora murayiro waMwari, anogona kunge akafunga kuti aizofa zuva risati ranyura. ‘Panguva yakwainge kwava kufefetera mukati mezuva,’ Jehovha akataura naAdhamu naEvha. (Gen. 3:8) Akatanga avapa mukana wokuti vataure zvavainge vaita. (Gen. 3:9-13) Uye akabva avapa mutongo. (Gen. 3:14-19) Kudai akavauraya ipapo ipapo, chinangwa chake chaiva nechokuita naAdhamu naEvha nevana vavo chingadai chisina kuzadziswa. (Isa. 55:11) Kunyange zvazvo chivi chakatanga kuvakanganisa kubva musi iwoyo, Mwari akavarega vachiva nevana avo vaizobatsirwa nehumwe urongwa hwaaizoita. Saka kuna Mwari, Adhamu naEvha vakafa zuva iroro chairo ravakatadza, uyewo vakafa ‘muzuva’ rimwe chete nokuti kuna Jehovha, makore 1 000 akaita sezuva rimwe chete.—2 Pet. 3:8.
8, 9. Chivi chaAdhamu chakakanganisawo sei vana vake? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
8 Zvakaitwa naAdhamu naEvha zvaizokanganisawo vana vavo here? Hongu. VaRoma 5:12 inoti: “Chivi zvachakapinda munyika nomunhu mumwe chete uye rufu zvarwakapinda nechivi, saizvozvowo rufu rwakapararira kuvanhu vose nokuti vose vakanga vatadza.” Munhu akatanga kufa aiva Abheri, mushumiri waJehovha akanga akatendeka. (Gen. 4:8) Uye vamwe vana vaAdhamu vakazochemberawo ndokufa. Kufa kwavakaita kwaireva here kuti vaivawo nechivi? Muapostora Pauro akati: ‘Vazhinji vakaitwa vatadzi nokuda kwokusateerera kwomunhu mumwe chete.’ (VaR. 5:19) Saka chivi nerufu zvakakonzerwa naAdhamu zvakava vavengi vevanhu, zvokuti vanhu vane chivi havagoni kuzvitiza. Hatikwanisi kunyatsotsanangura kuti zvakafamba sei kuti Adhamu apfuudzire chivi kuvana vake, asi chatinoziva ndechokuti tose tine chivi.
9 Ndokusaka Bhaibheri richitaura nezvechivi nerufu se“chifukidziro chinofukidzira marudzi ose, nechirukwa chakarukirwa pamarudzi ose.” (Isa. 25:7) Hakuna munhu anokwanisa kubuda muchifukidziro ichocho. Bhaibheri rinoti ‘vose vari kufa muna Adhamu.’ (1 VaK. 15:22) Ndokusaka Pauro akabvunza kuti: “Ndiani achandinunura mumuviri uri kuwana rufu urwu?” Aripo here aigona kumununura? *—VaR. 7:24.
CHIVI NERUFU ZVAKAKONZERWA NAADHAMU ZVICHAPARADZWA
10. (a) Ndedzipi dzimwe ndima dzeBhaibheri dzinoratidza kuti Jehovha achaparadza rufu rwakakonzerwa naAdhamu? (b) Ndima idzi dzinoratidzei nezvaJehovha uye Mwanakomana wake?
10 Jehovha ndiye aigona kununura Pauro. Isaya paakataura nezve“chifukidziro,” akabva atiwo: “Achaparadza rufu nokusingaperi, uye Changamire Ishe Jehovha achapukuta misodzi pazviso zvose.” (Isa. 25:8) Sezvinongoita baba vanobvisira vana vavo chero chinhu chinenge chichivatambudza ovapukuta misodzi, Jehovha anoda kuparadza rufu rwakakonzerwa naAdhamu! Anewo waanoshanda naye pakuita izvozvo. Pana 1 VaKorinde 15:22 panoti: “Vose zvavari kufa muna Adhamu, saizvozvowo vose vachaitwa vapenyu muna Kristu.” Uyewo, Pauro paakabvunza kuti “Ndiani achandinunura mumuviri uri kuwana rufu urwu?” akaenderera mberi achiti: “Mwari ngaaongwe nokuna Jesu Kristu Ishe wedu!” (VaR. 7:25) Zviri pachena kuti rudo rwakaita kuti Mwari asike vanhu haruna kupera pakapanduka Adhamu naEvha. Uyewo Jesu uyo akashanda naJehovha pakusika Adhamu naEvha, achiri kufarira vanhu. (Zvir. 8:30, 31) Asi vanhu vaizonunurwa sei pachivi norufu?
11. Jehovha akaitei kuti abatsire vanhu?
11 Adhamu paakatadza, Jehovha akamutongera rufu. Nemhaka yokutadza ikoko, tine chivi uye tinofa. (VaR. 5:12, 16) VaRoma 5:18 inoti: “Kudarika kumwe chete kwakaita kuti vanhu vemarudzi ose vapiwe mhosva.” Jehovha aizoitei kuti abatsire vanhu asingaiti zvinopesana nemitemo yake? Mhinduro yacho tinoiwana mumashoko aJesu okuti: ‘Mwanakomana womunhu akauya kuzopa mweya wake kuti uve rudzikinuro mukutsinhana nevazhinji.’ (Mat. 20:28) Mwanakomana wedangwe waJehovha akanyatsojekesa kuti sezvo iye akaberekwa panyika semunhu asina chivi, aizopa rudzikinuro. Rudzikinuro urwu rwaienzanirana sei?—1 Tim. 2:5, 6.
12. Kuti vana vaAdhamu vawane upenyu hwainge hwaraswa nababa vavo, paidiwa rudzikinuro rwakaita sei?
12 Jesu aikwanisa kurarama nokusingaperi nokuti ainge asina chivi. Izvozvo ndizvo zvainge zvakaitawo Adhamu asati atadza. Jehovha aida kuti nyika izare nevana vaAdhamu vasina chivi. Saka nemhaka yokuti Jesu aida chaizvo Baba vake uye vana vaAdhamu, akabayira upenyu hwake hwakakwana hwaienderana nehwakaraswa naAdhamu. Jehovha akazomutsa Mwanakomana wake ava nemuviri womudzimu. (1 Pet. 3:18) Saka Jehovha akabvuma chibayiro chomunhu mumwe chete iyeye ainge asina chivi, Jesu, kuti adzikinure vana vaAdhamu ovapa upenyu hwainge hwaraswa nababa vavo. Tinogona kutaura kuti Jesu akatsiva nzvimbo yaAdhamu. Pauro akati: “Zvakatonyorwa kuti: ‘Munhu wokutanga Adhamu akava mweya mupenyu.’ Adhamu wokupedzisira akava mudzimu unopa upenyu.”—1 VaK. 15:45.
Abheri, munhu wokutanga kufa, achabatsirwa nechibayiro chorudzikinuro chaJesu (Ona ndima 13)
13. “Adhamu wokupedzisira” achaita sei kuti abatsire vakafa?
13 Nguva yokuti “Adhamu wokupedzisira” ashande se“mudzimu unopa upenyu” ichasvika. Vana vaAdhamu vakawanda vachamutswa kuti vararamezve panyika.—Joh. 5:28, 29.
14. Urongwa hupi hwakaitwa naJehovha kuti abvise chivi chakakonzerwa naAdhamu?
14 Vanhu vachasunungurwa sei pachivi? Jehovha akaita kuti pave neUmambo hunotongwa na“Adhamu wokupedzisira” neshamwari dzake dzinotorwa panyika. (Verenga Zvakazarurwa 5:9, 10.) Sezvo vaya vachatonga naJesu kudenga vakamborarama panyika, vanonyatsoziva kuti chivi chinorwadza sei. Kwemakore ane chiuru, vachabatsira vaya vanenge vari panyika kuti vakunde chivi chavaisagona kukunda vari voga.—Zvak. 20:6.
15, 16. (a) ‘Muvengi wokupedzisira, rufu’ anotaurwa muBhaibheri ndiani, uye achaparadzwa rini? (b) Maererano na1 VaKorinde 15:28, Jesu achaitei?
15 Pachapera makore ane chiuru okutonga kwoUmambo, vanhu vanoteerera vachange vasunungurwa pavavengi vose vakaunzwa nokusateerera kwaAdhamu. Bhaibheri rinoti: “Nokuti vose zvavari kufa muna Adhamu, saizvozvowo vose vachaitwa vapenyu muna Kristu. Asi mumwe nomumwe padzoro rake: Kristu chibereko chokutanga, kwozotevera vaya vari vaKristu [vaachatonga navo], munguva yokuvapo kwake. Kwozotevera mugumo, paanogamuchidza umambo kuna Mwari wake uye Baba, paanenge aparadza hurumende dzose nechiremera chose nesimba. Nokuti anofanira kutonga samambo kusvikira Mwari aisa vavengi vose pasi petsoka dzake. Muvengi wokupedzisira achaparadzwa ndirwo rufu.” (1 VaK. 15:22-26) Chokwadi, rufu rwakakonzerwa naAdhamu ruchaparadzwa. “Chifukidziro” chinofukidza vanhu vose chichabviswa zvachose.—Isa. 25:7, 8.
16 Muapostora Pauro anoenderera mberi achiti: “Zvinhu zvose pazvinenge zvaiswa pasi pake, Mwanakomana achabva azviisawo pasi poUyo akaisa zvinhu zvose pasi pake, kuti Mwari ave zvinhu zvose kuvanhu vose.” (1 VaK. 15:28) Chinangwa chokutonga kwaJesu chichange chazadziswa. Achabva adzosera umambo kuna Jehovha uye achapa Mwari vanhu vakakwana.
17. Satani achaitwa sei?
17 Chii chichaitika kuna Satani uyo akatiparamurira nhamo dzose dzatiri kuona? Zvakazarurwa 20:7-15 inotipa mhinduro yacho. Vanhu vose pavanenge vasisina chivi, Satani achabvumirwa kuvaedza kokupedzisira. Dhiyabhorosi nevateveri vake vachaparadzwa zvachose ne“rufu rwechipiri.” (Zvak. 21:8) Rufu urwu rwechipiri haruzomboparadzwi nokuti vaya vanourayiwa narwo havazomborarami zvakare. Kana tichida Jehovha uye tichimushumira takatendeka, hatifaniri kutya “rufu rwechipiri.”
18. Basa rakapiwa Adhamu naMwari richazadziswa sei?
18 Panguva iyoyo, Jehovha achange ava kuona vanhu vanenge vakwana sevanokwanisa kuwana upenyu husingaperi, vasisina kana muvengi. Basa rakapiwa Adhamu naMwari richange rapedzwa. Nyika ichazara nevana vaAdhamu uye vachava nesimba pairi vachinakidzwa neupenyu. Ngatirambei tichifunga zvichaitwa naJehovha kuti aparadze muvengi wokupedzisira, rufu!
^ ndima 9 Bhuku rinonzi Insight on the Scriptures rinotsanangura zviri kuitwa nemasayendisiti kuti awane chinoita kuti tichembere uye tife richiti: “Vanokanganwa pfungwa yokuti Musiki pachake ndiye akapa mutongo worufu pamurume nomukadzi vokutanga, uye kuti hapana munhu anokwanisa kunyatsonzwisisa kuti akazviita sei kuti vanhu vakwegure.”—Vol. 2, p. 247.